Akpụkpọ ụkwụ friza → Uwe maka ụlọ ahịa oyi • Ihe mkpuchi kọmputa P&M
Akpụkpọ ụkwụ friza maka ọnọdụ dị oke egwu
Na ngalaba uwe maka friza na ụlọ ahịa oyi enwere ụdị friza akpụkpọ ụkwụ. N’ime akpụkpọ ụkwụ udi anyị na-enyekwa sọks ọkụ nke a gwara mmanụ iji rụọ ọrụ na obere okpomọkụ. Akpụkpọ ụkwụ siri ike, eriri siri ike na mgbakwunye gluing bụ nkwa nke nchekwa na nkasi obi. Akpụkpọ ụkwụ abụghị naanị atụmatụ ndị emegharịrị na-arụ ọrụ na friza na ime ụlọ oyi, kamakwa ọ dị n'oge a.
ERgbanye BIS oyi ụlọ ahịa akpụkpọ ụkwụ
Elu dị elu maka nkasi obi na nchekwa
Etkwụ bụ otu akụkụ nke ahụ na-adịkarị mfe ịjụ oyi, ọ bụ ya mere o ji dị mkpa iji kpuchido ha nke ọma maka ndị niile na-arụ ọrụ ọtụtụ awa kwa ụbọchị n'ime ụlọ ebe okpomọkụ na-agbadata -45 Celsius.
Na mgbakwunye na mma na nkasi obi nke oke ahọpụtara nke ọma, akpụkpọ ụkwụ ga-eweta nchebe dị mma megide ntu oyi. N'iburu nke a n'uche, anyị hụrụ na ụdị dị iche iche pụtara na onyinye ahụ.
Na-enye na-agụnye waterproof oyi ụlọ ahịa akpụkpọ ụkwụ mere nke cowhide dị ka Akpụkpọ ụkwụ gwara mmanụ gwara mmanụ akpụkpọ ụkwụ BCU. Anyị nwekwara akpụkpọ ụkwụ oyi ụlọ ahịa na-enweghị mmiri BERGIN BIS nke ngwakọta nke Pu na-eguzogide ọgwụ dị ala ruo - ogo 30. Modelsdị kachasị ọnụ bụ akpụkpọ ụkwụ Rockfall.
Akpụkpọ ụkwụ Rockfall Alaska Coldstore ha na-enye nchebe megide ịda ala ruo -40 ogo, a na-eji akwa ọka akpụkpọ anụ mee, nke na-eku ume ma na-enweghị mmiri. Na mgbakwunye, ha nwere Thinsulate sole B600 nke na-ekpo ọkụ, nke na-enye mkpuchi mkpuchi kachasị elu yana nnwere onwe iyi.
A na-enweta ngwaahịa Rockfall iji nye iwu n'ime ụbọchị 7 ọrụ, ebe a na-eziga ha n'ụlọ nkwakọba ihe anyị na England.
ROCKFALL Alaska COLDSTORE ụlọ ahịa oyi na-echekwa akpụkpọ ụkwụ na-echebe ruo -40 Celsius C
Na mgbakwunye na akpụkpọ ụkwụ bara uru maka ọrụ, anyị na-enyekwa sọks mkpuchi, dabere na ụdị eji ajị anụ, nylon ma ọ bụ akwa a na-ekpo ọkụ. Nnukwu nha nha na-enye gị ohere ịhọrọ ngwaahịa maka ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke.
Onyinye nke ulo ahia nkpuchi oyi bu ihe ndi ozo maka ndi eji aru oru. Enwekwara taabụ na ụlọ ahịa ahụ eriri afọ, Jaketị, uwe aka i ngafe maka ụlọ ahịa oyi na friza.
Akpụkpọ ụkwụ ColdstoreAkpụkpọ ụkwụ ụlọ ahịa oyiAkpụkpọ ụkwụ ụlọ ahịa oyiakpụkpọ ụkwụ nchekwaAkpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụAkpụkpọ ụkwụ Rockfallakpụkpọ ụkwụ maka obere okpomọkụakpụkpọ ụkwụ ọkachamara